VOLAMBITA SOATOAVINA MAMPIRAY : Hisy ny hetsika hampisehoana ny fomban-drazana malagasy
Manoloana ny hodidina ara-toekarena sy sosialy izay miharatsy hatrany ary manoloana ny fihanaky ny fanatontoloana dia tsapa fa tsy mahafantatra intsony izay tena fototry ny maha izy azy ny Malagasy, indrindra ny tanora. 1er septembre 2017
Very tanteraka ny soatoavina na amin’ny fomba fitafy na fiteny, eny fa na ny sakafo hohanina ankehitriny aza. Zary lasa nizarazara noho ny antony ara-politika sy ara-
toekarena ny mpiray tanindrazana, ka lasa voambolana sisa fa tsy iainana intsony ny fihavanana sy ny firaisankina. Izany rehetra izany no nahatonga ny fikambanana “Iray Madagasikara” nisafidy ny hifantoka amin’ny lafiny kolon-tsaina sy ny soatoavina.
Raha heverina mantsy dia ny famerenana amin’ny laoniny ny fomba tena malagasy no ahatongavana amin’ny tena firaisam-pirenena, ka ahafahana mampandroso haingana an’i Madagasikara. Izany indrindra no isany nikarakarana ny “volambita”, izay hetsika goavana hanehoana ny haren’ny kolontsaina manerana ny lafivalon’ny Nosy.
Tanora avy amin’ny sehatr’asa maro no mivondrona ao, ka samy mitondra ny traikefa ananany. Amin’ity taona ity dia hifantoka eto an-drenivohitra ny hetsika ; ka ny alin’ny 22 septambra 2017 ho avy izao no hanatanterahana izany. Ao amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely kosa no toerana hanaovana izany.
Seho maro dia maro no ho hita ao toy ny filatroana fanehoana ny fitafy sy ny taovolo malagasy nentim-paharazana ataon’ireo efa matihanina. Mpanakanto maro avy any amin’ny faritra ihany koa no hanafana ny lanonana amin’ny alalan’ny soradihy sy ny mozika mampisongadina manerana ny Nosy. Etsy andaniny ny fampisehoana ny sakafo mampiavaka antsika Malagasy ka ny “Tsiron’i Gasikara” , izay eo ambany fiahian’i Mariette Andrianjaka no hikarakara izany amin’ny fomba hafa kely.
Raha ny fanazavana voaray avy amin’ny tompon’andraikitra misahana ity hetsika ity ihany dia efa vonona tanteraka izy ireo fa ny fotoana hanatontosana azy sisa no andrasana ary efa miantso ny vahoaka tsy vakivolo mba ho tonga hanotrona izany.
Marihina fa amin’ity taona ity no hanombohana ny fankalazana ary tsy hijanonana intsony izany fa hitohy isan-taona.